Sidee loo helaa buugga 'pantone' ee qaab dijitaal ah? | Abuurista khadka tooska ah
Sidee loo helaa buugga 'pantone' ee qaab dijitaal ah?
Tan iyo markii Pantone lagu aasaasay Mareykanka qiyaastii 1962, waxay noqotay mid ka mid ah noocyada kala-soocidda midabka iyo nidaamka abaabulka ee naqshadayaasha dhammaan dhinacyada. Sidaad ogtahay, xulashada midabada waxaa lagu kala saaraa koodh ama nambar waana mid aad u ballaaran, oo daboolaya in ka badan toban kun oo doorsoomayaal ah. Mid kasta oo ka mid ah hooska la geliyay buugga 'Pantone' wuxuu leeyahay aqoonsi habkaanna waa wax aan macquul aheyn in qalad la galo markii la dooranayo tiro. Khaladaadyadani waxay u muuqdaan kuwo soo noqnoqda marka ay jiraan kala-shaandhayn shaashado kala duwan ama marka ay la shaqeynayaan qaabab midabbo kala duwan leh. Sannad kasta paletka waa la cusbooneysiiyaa oo dib loo habeeyaa sidaa darteed waa wax xiiso leh in aan booqano buugga inta badan.
In kasta oo inta badan lagugula talinayo inaan helno jaantuska midabka ee taageerada caadiga ah ama warqadda, naqshadeeyayaal badan ayaan ku sameyn karin tan iyo markii qiimaha uu aad u sarreeyo, haddii aanan khaldamin, qiimaheedu wuu kala duwan yahay inta u dhexeysa 70 iyo 300 euro. taasi waxay faa'iido u yeelan kartaa mar uun shaqo kasta walow aan taas idin xasuusiyo Adobe Photoshop wuxuu leeyahay buugga 'dijitaal dijitaal ah'. Si loo helo buugyarahan waxaan kaliya raacaynaa tallaabooyinka soo socda:
Waxaan u tagi doonnaa midabada midabka si aan u riixno midabka hore.
Daaqadda pop-up-ka waxaa ku yaal badhan loo yaqaan «Maktabadda midabka«
Xulashada sare dhexdooda waxaa ku jira a hoos u dhig tab. Hadaad gujiso waxaad dooran kartaa buugga aad rabto inaad isticmaasho ee Pantone.
Ugu dambeyntii dooro hooska la doonayo oo la shaqee.
Sidii aan ku idhi waad heli kartaa sidoo kale go'yaal dijitaal ah shabaqa dhexdiisa. Waa kuwan tusaalooyin:
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Sidee loo helaa buugga 'pantone' ee qaab dijitaal ah?
Warbixinta Pantone: Dayrta / Jiilaalka 2015/2016 Hooska
PNGImg: Ku soo dejiso kumanaan sawirro bilaash ah qaabka PNG